Olu hlobo lwenza uhlambuluke kwaye lube luncedo, luhambelane kwaye lwenze iinqumlo zomzimba wakho ngakumbi nakowesifazana, kwaye ekugqibeleni, luzisa ubuso bakho koothixo. Ewe, indlela yamaGrike. Indlela yamaGrike kwiingubo iphakamileyo yefashoni, kwaye ayiyi kuphuma kuyo ixesha elide. Mhlawumbi kwakungekho mboniso wefashoni enye, apho kwakungekho nkcukacha enye kwi-style kaThixo. Ubunqa obuninzi, ubuninzi beemfumba kunye neengxowa, amahlombe avulekileyo, umgca omnye kuphela okanye akukho nakwezinye - zonke ezi zizinto zesimo seentonga zamaGrisi. Inxalenye ethile yembali
Bonke abantombazana bamaGrike basendulo banelisekile ngeengubo zabo zokugqoka, bawafihla ngokugqithiseleyo iimpazamo zaloo mzobo kwaye babonakala bekrazula. Mhlawumbi, yiyo le khrayitheriya eheha abafazi bethu bezakhiwo zeemfashini nezanamhlanje. Yenziwe ngokugqithisileyo okubonakalayo, ekhangayo kumathenda okuthintela, izinto ezenziwe ngesiGrike ziza kwenza nayiphi na indoda ibheke emva kwakho - umfazi "oyingcwele".
Kutheni isitayela sesiGrike sithandwa kangaka?
Ingubo yamaGrisi emgangathweni iyanxiba ngokugqithiseleyo iimpawu zokugqiba, imitshato kunye nezinye iziganeko ezibalulekileyo. Akunjalo, ngenxa yokuba inqweno ephakamileyo iya kugxininisa ngokucacileyo isifuba sayo nasiphi na isayizi, ngokubonakalayo yenza ulweleni lwakho lube mncinci kwaye luhle kakhulu, ngokubanzi, luya kwenza konke ukukwenza uzive ukhululekile, ngokukhawuleza, kwaye uzibambelele ukubukeka kwamadoda. Ukusikwa kwamahhala kweekhati kunika ngokulula kunye nentuthuzelo, kunye nemibala ye-pastel imiyalezo iya kukunika ukubonakala okulula, ubabalo kunye nobufazi.
Izambatho kunye neengubo eziphantsi komgangatho ziya kuhambelana nayiphi na intombazana, kuba zibukeka zinkulu, njengezithende eziphezulu, kunye nezicathulo ezikhululekile okanye izicathulo ezibophekileyo kwintlanzi. Ngendlela, iindawo ezincinci ziya kuba sezinqabeni zakho - ngcono, kuba le yinye yempawu yezicathulo zamaGrike. Ukuba unqwenela, unokuyihobisa imilenze eneebhande ezincinci. Kodwa ukuba awuyithandi iingubo ezantsi, uza kufumana iingubo ezimfutshane zokugqoka iingubo okanye iingubo ezimhlophe, ezikhangeleka kakuhle ngeentambo kunye nezifutshane ezimfutshane. Abanye abasetyhini kunye namantombazana bakholelwa ukuba ukuzaliseka akuhlanganiswanga kunye neengubo zamaGrisi, kwaye kungenalutho, yenzelwe zonke iindidi zokukhula komzimba, njengoko ihamba ngokugqithiseleyo ukugoba komzimba kwaye ibukeka ibonisa ukukhula okuncinci.
Ngaba kufanelekile ukuthenga ingubo yomtshato ngesiGrike?
Ewe, kuxabiseke! Isitimela eside somsila womtshakazi kwaye ufuna ukuthinta, ukuvela kuye nokuva ububele bobukumkani. Isibhinqa sihlanganiswe ngombala omhle, kwaye kubonakala ngathi kunobuncinci kunokuba kunjalo. I-Bust igxininisa amaza okugqithisa emigqabeni, yenza kube lula ngakumbi. Izindandatho ezide zomtshakazi zithinte amahlombe avulekileyo, khanyisa ekukhanyeni, njenge-halo. Izicathulo ziphosa ngokukhawuleza phantsi kwesiketi esikhanyayo ukuya kumgangatho, ihamba ngemilenze yenkosikazi yayo njengamaphiko e-airy. Ngomnquba onqabileyo entloko yakhe, umtshakazi uza kumyeni wakhe, kwaye lowo otyunjwayo akakwazi ukumthabatha amehlo aze aqale umkhosi, njengabo bonke abatyeleli, abathandwa ngumntwana wentombazana. Ewe, ngubani ongeke afune ukuba unkulunkulukazi onjalo ehla ezulwini?
Ukukhetha izesekeli kwiingubo zakho zokugqoka kunye neengubo, kuyafaneleka ukuba ujonge kwimvelaphi yaseGrisi yamandulo, njengoko umfanekiso wakho wonke umele uxoxwe ngokoqobo. Kwimihlobiso yakho inokuthi ibe khona emininzi yamaketanga amancinci, iintsimbi ezininzi ezinqamlekileyo, nazo, ziya kufana. Izibhande ezinqabileyo, amabhinqa ensimbi, iibhande zensimbi ezibandakanya ubunqabileyo obunqabileyo, amacici omnandi ojikelezayo okanye obolongqeleko, iingubo ezinkulu "zobukhosi" - konke oku kufuneka kugxininise iifom zakho, zikhanyise ekukhanyeni kwaye zenze isixeko saseAphrodite.
Musa ukulibala malunga neenwele. Ikhefu elikhethiweyo elichanekileyo liya kuzalisa umboniso wendawo yomfanekiso wakho. Izinwele akudingeki ukuba zihlangane ngokupheleleyo, ngaphambi kokuba amaGrike athande ukukrazula ambalwa amacu aphuma kwisiqhamo esinqambileyo, ekhanyela imfihlelo kwaye avumela ukuba abaninzi babone ubuhle beenwele eziqhelekileyo. Unako kwaye ungakhubekisi, kodwa vele ubophe izinwele zakho ngebhebhoni elincinci, okanye ubophe i-ribhoni ngomsila ophantsi. Izinwele zakho ziza kufezekisa ngokugqibeleleyo iiplanga ezinokubhenela ngamagqabi amancinci njengesiqhelo somnquma waseGrisi okanye igolide eqhelekileyo, njengoko ungasebenzisa ukungabonakali, unike umqolo wesikhumba. Kuya kubonakala i-barrettes enobumba obuhle kunye neentsimbi.
Ungesabi ukuzama, hamba endleleni eya ebuhleni nobukhulu boothixo bamaGrike basendulo.
Ungayifumana njani into enhle kwizithombe?
Isitayela sobuRoma kwisambatho
Indlela yokukhetha isambatho sabafazi abacebileyo?
Ubuhle kunye nomsebenzi: ubudlelwane kunye neengxaki
Ukutya okunempilo - uphuhliso lwabantwana
I-Oatmeal smoothies neebhanana kunye neerberberries
Indlela yokukrazula iimpumlo kwiintsimbi
Ukulungiselela isaladi yeengcawa phantsi kweengubo zoboya
Yintoni enokuthi iboniswe ngokuzimela kwabasetyhini?
Dye amachashaza amnyama kwimpumlo
Iziphumo zesisu sokukhupha isisu
Isaladi kunye neetatayi, i-avocado kunye ne-shrimps
Umbala weGyometri: imivimbo - umthamo omtsha weentsuku
I-cream ye-cream ene-chocolate icing